आफ्ना नागरिक नफर्काउने देशसँग श्रम सम्झौता रद्द गर्ने यूएईको निर्णयको असर कति?- प्रवास - कान्तिपुर समाचार
आफ्ना नागरिक नफर्काउने देशसँग श्रम सम्झौता रद्द गर्ने यूएईको निर्णयको असर कति?
यूएई सरकारको निर्णयपश्चात् नेपालसँग एउटै विकल्प छ- छिटोभन्दा छिटो फर्कन चाहने आफ्ना नागरिकलाई फर्काउने। नत्र गतवर्षको द्वीपक्षीय सम्झौतालाई एकपक्षीय रुपमा यूएईले रद्द गरेको निर्णय कुर्ने।
वैशाख ४, २०७७ मेघराज सापकोटा
यूएई — मध्यपूर्व खाडीका ६ राष्ट्रसहित लेबनान, इजिप्ट, इजरायल, इराक र जोर्डन गरेर यो क्षेत्रका ११ राष्ट्रमा २९ हजारभन्दा बढी कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) बाट संक्रमित भएका छन्।
खाडीका ६ राष्ट्र साउदी अरब, यूएई, कतार, ओमान, बहराइन र कुवेतमा मात्र संक्रमित हुनेको संख्या १४ हजारभन्दा बढी पुगेको छ।
रिपोर्टअनुसार संक्रमितको संख्या सबैभन्दा बढी साउदी अरबमा ४ हजार ४ सय ६२ र यूएईमा ४ हजार १ सय २३ रहेको छ। त्यसैगरी कतारमा २ हजार ९ सय ७९, ओमानमा ५ सय ९९, बहराइनमा १०१६ र कुवेतमा १२३४ जना संक्रमित रहेको तथ्यांक छ। यी देशमा अहिले संक्रमितको संख्या बढ्ने क्रम धेरै छ। दैनिकजसो १५ सयको हाराहारीमा संक्रमित थपिने क्रम जारी छ।
नेपाल सरकारले देशबाहिर आफ्ना नागरिकको संख्या ४१ लाख रहेको बताएको छ। वैध/अवैध गरी खाडीका देशमा मात्र १५ लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन्। सबैभन्दा बढी साउदी अरबमा ४ लाख, कतारमा साढे ४ लाख, यूएईमा ३ लाखको हाराहारीमा नेपालीहरु रहेका छन्।
खाडीका यी राष्ट्रमा कति नेपाली संक्रमित भएका छन् भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छैन। यूएईस्थित नेपाली दूतावासले १० दिनअघि यहाँको स्थानीय निकायले ११ जना नेपाली संक्रमित भएको जानकारी गराएको जनाएको थियो। त्यसपछि दूतावासले कुनै जानकारी पाउन सकेको छैन। तथापि यूएईमा रहेका नेपालीका विभिन्न संघसंस्थाले आफूहरुसँग सम्पर्कमा आएका संक्रमित नेपालीको संख्या ३० को हाराहारीमा रहेको जनाएका छन्। ती नेपालीमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको र अस्पतालले भनेबमोजिम आइसोलेसनमा बसिरहेको उनीहरुले बताएका छन्।
नेपाली दूतावास अबुधाबीले आफूहरुसँग सम्पर्कमा आएका नेपालीलाई अस्पतालसम्म लैजान विभिन्न प्रयास गरिरहेको बताएको छ। केही नेपालीलाई आफ्नो अनुरोधमा अस्पताल लगेर उपचार गरिरहेको दूतावासको भनाइ छ। त्यसबाहेक खाडीका यी क्षेत्रमा ४० जनाभन्दा बढी नेपाली संक्रमित भएको आधिकारिक जानकारी छ। सबैभन्दा बढी बहराइनमा २२ नेपाली संक्रमित भएका छन्। कुवेतमा ११ र साउदीमा ४ जना नेपाली संक्रमित भएको जनाइएको छ।
यी देशका नेपाली दूतावासहरु ‍यतिबेला आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा खटिइरहेका छन्। हरेक दिन कैयौं नेपाली दूतावासमा फोन गरी कोरोना महामारीको असरबारे सोधखोज गरिरहेका हुन्छन्। दूतावासले उनीहरुको जिज्ञासा समाधान गरिरहेको छ।
प्रवासका नेपालीहरुले कतिपय केसमा उपचारमा ढिलाइ हुने गरेको गुनासो गरेका छन्। दूतावासले भने सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने गरेको र बिरामीसँग नियमित सम्पर्कमा रही सहयोग पुर्‍याउने गरेको जनाएको छ। 'हामीसँग पनि कतिसम्म जाने भन्ने लिमिटेसन छन्। तथापि क्षमताले भ्याएसम्म हामीले सहयोग गरिरहेका छौं,' दूतावास स्रोतले भन्यो।
खाडीका यी देशमा भारतीयहरुको जनसंख्या उल्लेख्य छ। हरेक देशमा २५ देखि ३० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय नागरिक छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले गत वर्ष प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार यूएईमा ३३ लाख भारतीय छन्। सोही अनुपातमा खाडीका अन्य देशमा पनि भारतीय पुगेका छन्। त्यसपछि पाकिस्तानी र बंगलादेशीहरु खाडीका यी देशमा रहेका छन्। यसकारण पनि कोरोना संक्रमितमा सबैभन्दा बढी भारतीय छन्।
औषधि छर्केर विषाणु नष्ट गर्ने भन्दै गत महिनायता बेलुकी ८ बजेदेखि बिहान ६ बजे सम्म यूएईभर आवतजावतमा रोक लगाइएको छ। अप्रिल ५ देखि दुबई राज्यले अति आवश्यकबाहेक २४ घन्टा नै यातायात र आवतजावतमा रोक लगाएको छ। धेरै कम्पनी बन्द भएका छन्। प्राय: नेपाली कोठामै बसिरहेका छन्। कहीले बेतलबी बिदा पाएका छन्। केहीलाई वार्षिक बिदा दिइएको छ। केहीको जागिर नै गुमेको छ। केहीको तलब घटाइएको छ भने केहीचाहिँ घरमै बसेर काम गरिरहेका छन्।
जागिर गुमेका नेपालीलाई खाद्यान्न संकट भएको भन्दै गैरआवासीय नेपाली संघले खाद्यान्न सहयोग गरिरहेको छ। अप्रिल १३ सम्म ५ सयभन्दा बढीलाई खाद्यान्न सहयोग गरेको गैरआवासीय नेपाली संघ यूएईका अध्यक्ष प्रकाश कोइरालाले बताए। लकडाउनको स्थिति लम्बिने हो भने अझै धेरै नेपालीलाई समस्या पर्न सक्ने मध्यपूर्वका सहसंयोजक मनोज कुमार गोर्खालीले अनुमान गरेका छन्। गोर्खालीको नेतृत्वमा एनआरएन यूएईको एउटा टोली दुबई प्रहरीसँग सहकार्य गरिरहेको छ। नेपालीहरुलाई सहयोग र उद्धार गर्ने कार्यमा उनीहरु स्थानीय निकायसँग मिलेर काम गरिरहेको गोर्खालीले बताए।
अर्कोतिर यूएईमा रहेको नेपालीको पुरानो संस्था नेपाली समाज, विभिन्न जातीय संस्था र राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरुले प्रभावित नेपालीहरुको तथ्यांक तयार गरी सहयोग गर्न थालेका छन्। नेपाली समाजका अध्यक्ष गोविन्द ढकालले सबै संघसंस्थासँग सहकार्य गरेर भविष्यमा आइपर्ने समस्यासँग जुध्न आफूहरुले तयारी गरिरहेको बताए।
रोजगारी गुमाएर समस्यामा पर्ने नागरिक थपिँदै जाँदा यूएई सरकारले गत साता नै विदेशी नागरिकलाई मुलुक फर्कन सक्ने भन्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको अर्थ रोजगारी गुमाएका विदेशी नागरिक छिट्टै आफ्नो मुलुक फर्किऊन् भन्ने उसको आसय थियो। साता दिन बितिसक्दा पनि कोही विदेशी नागरिक नफर्किएपछि १२ अप्रिलमा यूएई सरकारले अर्को निर्णय गर्‍यो। त्यो थियो- आफ्नो मुलुक फर्कन चाहने नागरिकलाई फर्कन नदिने राष्ट्रहरुसँगको श्रम सम्झौतामा पुनर्विचार गर्ने र रद्दसमेत गर्न सक्ने। यूएई सरकारको यो निर्णयले नेपाललगायत दक्षिण एसियाका अन्य मुलुक दबाबमा परेका छन्।
भारतमा लगातार लकडाउन चलिरहेको छ। यसलाई वैशाख २१ सम्म लम्ब्याइएको छ। नेपालमा पनि लकडाउनका अवधि पुन: थप गरी वैशाख १५ सम्म पुर्‍याइएको छ। पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकामा पनि यही स्थिति रहेको छ। हवाई यातायात अवरुद्ध छ। यस्तो अवस्थामा यूएईमा रहेका अधिकांश कामदार समस्यामा परेका छन्। कैयौं गर्भवती महिला अलपत्र परेको अवस्था छ। घुम्न गएका वृद्धवृद्धा र बिरामी नागरिक यतै अड्किएका छन्। नागरिकहरुले आफ्नो मुलुक फर्कन पाएका छैनन्।
नेपाललाई एकातिर आफ्ना नागरिक फर्काउनुपर्ने दबाब परेको छ भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न झनै टाउको दुखाइ बन्ने निश्चितजस्तै छ। गैरआवासीय नेपाली संघले यूएईमा मात्र स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीको संख्या ५ हजारको हाराहारीमा रहेको जनाएको छ। यो संख्या २ दिनभित्र नेपाल फर्कन आफ्नो इच्छा जाहेर गर्नेहरुको संख्या हो। हरेक दिन यो संख्या उल्लेख्य बढ्ने निश्चित छ। यही अनुपातमा खाडी क्षेत्रबाट मात्र तत्काल जागिर गुमेका नेपालीलाई मुलुक भित्र्याउने हो भने तत्काललाई १ लाखभन्दा बढी नेपालीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
खाडीका एक तिहाइले जागिर गुमाए भने पनि ५ लाख नेपालीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने अहिले नै विकल्प सोच्नुपर्छ। मलेसियाको पनि थपियो भने स्थिति भयाभय र थामिनसक्नु हुन सक्नेछ।
यूएई सरकारको यो निर्णयपश्चात् नेपाल सरकारसँग एउटै विकल्प छ। छिटोभन्दा छिटो फर्कन चाहनेलाई नेपाल फर्कन दिने। नत्र यूएई सरकारसँग नेपालले गत वर्ष गरेको द्वीपक्षीय सम्झौतालाई एकपक्षीय रुपमा यूएई सरकारले रद्द गरेको निर्णय कुर्ने।
प्रकाशित : वैशाख ४, २०७७ १५:४४
अन्योलमा खाडीका नेपाली कामदार
चैत्र २, २०७६ मेघराज सापकोटा
काठमाडौँ — संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)स्थित अल ऐनमा कार्यरत झापाका गुरू बरालले नेपाल जाने आफ्‍नो योजना केही महिनाका लागि स्थगित गरेका छन् । उनले मार्च १३ मा नेपाल जाने टिकट लिएका थिए ।
घरमा छोराछोरी, श्रीमती र आमाबाबुलाई कोसेली समेत किनिसकेका थिए । तर, कोरोना भाइरसका कारण उनको कम्पनीले उनलाई छुट्टीमा नजान सुझाव दियो । कम्पनीको सुझाव अनुसार उनले छुट्टीको योजनालाई स्थगित गरे ।
स्याङ्जाका लक्ष्मण खनालको आगामी मार्च २३ तारिखको टिकट छ । घर परिवारसँग ४० दिनको वार्षिक बिदा मनाउने उनको योजना नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न रोकेसँगै तुहिएको छ । ४० दिनमा पनि अवस्था सुध्रिएन भने के गर्ने ? यही प्रश्‍न्ले नेपाल जाने कि नजाने भन्‍ने दोधारमा छन् लक्ष्मण । गएर ‘सेल्फ क्वारेन्टाइनमा’ बस्नुपर्ने, अवस्था झनै बिग्रियो भने के गर्ने ? विदेशै भए पनि केही भइहाले नेपालको भन्दा राम्रो उपचार यूएईमा हुनसक्ने विश्वास उनको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड (१९) को विश्वव्यापी महामारीले अहिले विदेशमा बस्‍ने नेपालीहरू चिन्तित बनेका छन् । कोरोना भाइरसबारे सूचनाको अभाव सो सम्बन्धी ज्ञानको अभाव र सामाजिक सञ्जालमा आएका विभिन्‍न भ्रमपूर्ण भिडियो र समाचारले उनीहरूलाई अझ धेरै मानासिक तनाव दिएको छ ।
मध्यपूर्वका खाडी राष्ट्रहरू पनि अहिले विश्वव्यापी महामारीको चपेटामा परेका छन् । यूएईबाट झण्डै १ सय माइल हवाई दूरीमा रहेको इरान सबैभन्दा बढी आक्रान्त बनेको छ । इरानको स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ६ सयभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने ११ हजारभन्दा बढी यो भाइरसको संक्रमणमा परेका छन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार खाडी मुलुकहरूमा सबैभन्दा बढी संक्रमित कतारमा ३ सय २० जनाछन् ।
बहराइनमा १ सय ९५, कुवेतमा १ सय, साउदी अरेबियामा ८६, यूएईमा ८५ र ओमानमा १८ जनालाई संक्रमण भएको ती देशले पुष्टि गरेका छन् । अहिलेसम्म खाडीका ६ राष्ट्रहरूमा ८ सय ४ जनामा संक्रमण देखिएको छ र यो दिनहुँ बढ्ने क्रम जारी छ । कतिपयले योभन्दा बढी संक्रमित हुनसक्ने आशंका समेत गरेका छन् । यूएईमा मात्र अहिलेसम्म २० जना पूर्णरूपमा निको भएर घर फर्केका छन् । अन्य खाडी राष्ट्रमा पनि धेरैले उपचार पाएर घर फर्केका छन् ।
मध्यपूर्वका कुनै पनि मुलुकहरू यसको संक्रमणबाट अछुतो रहेनन् । यसको वृद्धि दरले यस क्षेत्रमा रहेका झण्डै १५ लाख नेपालीमा जोखिम बढेको देखिन्छ । खाडी मुलुकहरूमध्ये हालसम्म यूएईमा नाम नखुलाइएका २ जना नेपालीलाई संक्रमण भएको भनिए पनि अन्य मुलुकमा नेपालीलाई संक्रमण भए, नभएको बारे यकिन जानकारी छैन ।
कुवेतले आफ्नो देशलाई ‘लक डाउन’ गरिसकेको छ । गत सातादेखि नै कतारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द गरेको छ । साउदी अरबले शनिबारदेखि दुई हप्ताको लागि उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । ओमानले उडानहरूको कटौती गर्दै तत्काललाई टुरिस्ट भिसा दिन बन्द गरेको छ ।
यूएईले उच्च जोखिममा रहेका देशहरूसँगको उडान स्थगित गरी आवातजावतलाई कडा गरेको छ । राजधानी अवुधाबीमा बार, क्लबहरू बन्द गरिएका छन् भने हुक्का सेवनलाई पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाइएको छ । शारजाहले सार्वजनिक पार्कहरू बन्द गरेको छ ।
यहाँका राज्यहरूले आफ्‍नो कानुन अनुसार कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गरेका छन् । कम्पनीहरूले आफ्ना कामदारलाई सुरक्षाका उपाय अपनाउन निर्देशन जारी गरेका छन् । अति जरूरी कामबिना भीडभाड, मल र पार्कहरू नजान, अनावश्यक घुमफिर र अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा नगर्न आफ्ना कामदारहरूलाई सुझाएका छन् । विद्यालय र कलेजहरू बन्द गरिएका छन् । विद्यार्थीलाई घरबाटै अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्न थालिएको छ । कम्पनीले आफ्‍ना कामदारहरूको शरीरको तापक्रमको रेकर्ड राख्‍न थालेका छन् । छुट्टिबाट फर्किएका कामदारहरूलाई १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्‍न थालेका छन् ।
कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएसँगै यसले खाडी मुलुकहरूसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ । विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आएसँगै तेलमा निर्भर रहेका खाडी राष्ट्रको अर्थतन्त्र डगमगाउने देखिन्छ । विश्व नै ‘लकडाउन’ हुने स्थिति पैदा भए यहाँको पर्यटनक्षेत्रलाई ठूलो असर पर्नेछ । यूएईले २०१९ मा २ करोड पर्यटक भित्र्याएको थियो भने २०२० अक्टोबरमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शनी ‘एक्स्पो २०२०’ सुरु हुँदैछ । दुबईमा आयोजना हुने एक्स्पो २०२० ले दुबईको मुहार फेरिने अपेक्षा रखिएको अवस्थामा कोरोना भाइरसको महामारीले सबैलाई चिन्तित तुल्याएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक भ्रम पैदा नगर्न र सरकारका आधिकारिक सूचनाहरूलाई विश्वास गर्न भनिएको छ । भ्रमपूर्ण समाचारहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिए ३ वर्ष जेलदेखि ३० लाख दिर्हामसम्म जरिवाना गर्ने सूचना यूएई सरकारले जारी गरेको छ ।
खाडी राष्ट्रहरूमा कोरोना भाइरसको प्रकोप बढेसँगै नेपालीहरू चिन्तित बन्‍न थालेका छन् । नेपालका स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले राज्यले कोरोना संक्रमितको आशंकामा कसैलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्‍न नसक्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उनीहरू झनै चिन्तित बनेका छन् । कथम्कदाचित् भविष्यमा विश्व नै महामारीको चपेटामा परेर नेपाल फर्कनु परेको अवस्थामा आफूहरूको स्थिति के होला भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
खाडी राष्ट्रमा रहेका नेपाली दूतावासहरूले आफ्ना नागरिकलाई सजग रहन सूचना जारी गरेका छन् । नेपाली दूतावास अवुधाबीले उच्च सतर्कता अपनाउन व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिन अनुरोध गरेको छ । मार्च १२ मा एक सूचना जारी गरी नेपाली दूतावास अवुधाबीले अनावश्यक रूपमा ठूला जमघट, भेलाको आयोजना नगर्न र भीडभाडबाट टाढा रहन विशेष अनुरोध गरेको छ । उसले नआत्तिन र विशेष सतर्कता अपनाउन अनुरोध गर्दै आफूलाई कोरोना भाइरस लागेको शंका लागेमा यूएई सरकारका विभिन्न निकाय र नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराउन समेत भनेको छ ।
त्यसैगरी कतार, साउदी अरब, ओमान, बहराइन, कुवेतलगायत खाडीका सबै राष्ट्रमा रहेका नेपाली दूतावासहरूले नेपालीलाई उच्च सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा भयभित बन्‍नुभन्दा पनि सतर्कता अपनाउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ । सम्बन्धित देशका सरकारले जारी गर्ने सही सूचनाहरूबाट आफूलाई अपडेट गरिरहनु पर्छ । गलत र भ्रमपूर्ण सूचनाहरूको पछि लागेर दुःखी बन्नुभन्दा सरसफाइका उपायअवलम्बन गर्न जरूरी छ । थर्मोमिटर किनेर आफूले आफैंलाई बारम्बार जाँच गरिरहने र शंका लागे तुरून्त नजिकको अस्पताल जानु पर्छ । आफूसँग बस्‍ने कोही साथीलाई संक्रमण भएको शंका लागेमा आफूले पनि होसियारी अपनाउने र साथीलाई पनि उपचारको लागि सहयोग गर्न जरूरी हुन्छ । विश्वमा नै महामारी भइरहेको बेला आफू बसेको राष्ट्रलाई आफूले पनि सकेको सहयोग गर्ने र यसको नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउने हामी सबैको कर्तव्य हो ।
दूतावासले सूचना जारी गरेपछि हरेक शुक्रबार हुने नेपाली समुदायले गर्ने कार्यक्रमहरू हुन छाडेका छन् । दुबई क्षेत्रमा क्लबहरूमा हुने कार्यक्रमहरू भने यथावत जारी रहेका छन् । शुक्रबार बेलुकीमात्र दुबईमा गायकद्वय नरेन्द्र प्यासी र सुगम पोखरेलका पूर्व निर्धारित सांगीतिक कार्यक्रमहरू यथावत रूपमा भए । सधैँजस्तो भीड रहने दुबईको नेपाली पार्कमा शुक्रबार केही कम नेपालीहरू भेला भए । सपिङ मलहरूमा पनि अन्य दिनहरूभन्दा कम नेपाली जान थालेका छन् ।
परिस्थिति अझ बिग्रदै गए खाडी राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र पनि जोखिममा पर्नेछ । यहाँका कम्पनीहरूको भविष्य र ती कम्पनीमा कार्यरत नेपालीहरूको कामबारे अहिले नै भविष्यवाणी गर्नु हतारो हुनेछ । तर, के अनुमान गर्न सकिन्छ भने यस्तै अवस्था बढ्दै गए निश्चय नै ती कम्पनीहरूले धेरै कामदार कटौती गर्नेछन् । अवस्था नियन्त्रणमा नआए केही कम्पनीले आˆना कामदारहरूलाई एक/दुई महिना बेतलबी विदा दिन सक्ने स्थिति पनि देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा नेपाल जान पनि नसकिने र आˆनै खर्चमा कोठामा बस्नुपर्ने भएमा आर्थिक भार पर्नेछ । त्यसैले विदेशमा बस्ने विशेष गरी खाडी मुलुकहरूमा रहेका नेपाली कामदारहरूले अहिलेदेखि नै फजुल खर्चमा कटौती गर्न जरूरी छ ।
प्रकाशित : चैत्र २, २०७६ १४:४९